Seranam-piaramanidina Nosy Be : Efa afaka miasa taorian’ny asa fanamboarana
Tsy miandry ela. Tontosa soa aman-tsara ny asa fanamboarana sy fanitarana ny seranam-piaramanidin’i Nosy, izay tantanin’ny Ravinala Airports. Araka izany, nidina tany an-toerana nandray ny fahavitan’ny asa ny minisitra eo anivon’ny Prezidansa misahana ny tetikasan’ny …Tohiny
Etienne Ralitera : Nodimandry Omaly
Omaly no nodimandry ny lehiben’ ny mari-boninahitra Malagasy Etienne Ralitera, noho ny aretina izay nahazo azy. Hatreto anefa dia mbola eo ampandaminana ny fandaharam-potoana rehetra ny fianakaviana, ary ho fantatra miandalana izany. Marihana fa efa …Tohiny
Orinasa Jirama : 100 miliara Ariary tsy voaloan’ny mpanjifa
Misedra fatiantoka hatrany ny orinasa Jirama hatramin’izao. Fatiantoka izay ateraky ny tsy fandoavana vidin-jiro avy amin’ny mpanjifa. Vokatra ny tsy fandoavana herinaratra izay indrindra, voalaza fa mahatratra 100 miliara Ariary no tsy voaloan’ny mpanjifa amin’ny …Tohiny
Fiarovana ny zon’ny olombelona : Nodimandry i Rabary Mathilde
Nodimandry omaly alatsinainy 30 oktobra i Rabary Mathilde. Ity farany izay efa solombavambahoaka teo aloha, mpitsabo, mpahay lalàna no sady reniny ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena ankehitriny, Rabary Paul. Isan’ny nahafantarana an’i Rabary Mathilde ihany koa, …Tohiny